Hal-abuurnimo - Joornaalka Naqshadeynta
Cuntada Cabitaanka Quruxda waa sida dahab qurxoon oo aad cabbi karto! Waxaan sameynay iskudarka labo shay oo si gooni gooni ah loogu adeegsaday shaah: Nacnac Rock iyo xaleef liin. Naqshaddan gebi ahaanba waa la cuni karaa. Marka lagu daro xaleef liin ah qaab dhismeedka nacnaca, dhadhamadiisu sifiican ayey u fiicnaanayaan qiimahooduna wuu kordhayaa fiitamiinnada liin. Naqshadeeyayaashu waxay si fudud u beddeleen ulaha dhagxaanta nacnacda dhagaxa lagu xajisto iyadoo la jeexjeexay liin liin dhanaan ah. Cabitaanka Quruxdu waa tusaale buuxa oo ka ah adduunka casriga ah kaasoo keena qurux iyo hufnaan dhammaanteed.
Kaabsal Kaabsoosha Wild Cook, waa kaabsal oo ay ka kooban yihiin waxyaabo kala duwan oo dabiici ah waxaana loogu talagalay in lagu qiijiyo cuntada lana abuuro dhadhan iyo udgoon kala duwan. Dadka badankood waxay aaminsan yihiin in sida kaliya ee cuntada looga dhigi karo in la qariyo waa iyadoo la gubo noocyo kala duwan oo qoryo ah laakiin runta ayaa ah, waxaad cuntadaada ka dhigi kartaa mid sigaar ah waxyaabo badan oo aad ku abuuri karto dhadhan iyo udgoon dhan oo cusub. Naqshadeeyayaashu waxay xaqiiqsadeen kala duwanaanshaha dhadhanka adduunka waana sababtaas awgeed naqshadani gebi ahaanba waa la bedbeddelayaa marka ay timaado arrinta ku saabsan adeegsiga gobollada kala duwan. Kaabsooshadan waxay ku jiraan maaddooyin isku dhafan oo hal mar ah.
Sanduuqa Qadada Warshadaha wax lagu cuno ayaa si weyn u koraya, qaadashada qaadashaduna waxay noqotay mid lagama maarmaan u ah dadka casriga ah. Isla mar ahaantaana, qashin badan ayaa sidoo kale la sameeyay. Qaar badan oo ka mid ah sanaadiiqda cuntada ee loo isticmaalo in lagu hayo cuntada waa la warshadayn karaa, laakiin bacaha balaastigga ah ee loo adeegsado inay ku ridaan sanduuqyada cuntada runtii dib looma sheegi karo. Si loo yareeyo isticmaalka bacaha balaastikada ah, shaqooyinka sanduuqa cuntada iyo balaastigga ayaa la isugu darayaa si loo qaabeeyo sanduuqyada qadada cusub. Sanduuqa bale wuxuu u rogaa qaybta lafteeda gunta gacanta ku fududahay in la qaado, oo iskudhafan kara sanduuqyo badan oo cunto ah, si weynna u yaraynaysa adeegsiga bacaha balaastigga ah ee lagu ridayo sanduuqyada cuntada.
Cuntada Cabitaan Kaabsal Birta Curling Toosan Timaha Sanduuqa Qadada